पिउने पानीको कुरा - Kavre Times Weekly | Kavre Times Weekly
पिउने पानीको कुरा
-हरिप्रसाद दुवाल (स्यानिटेरियन)
मानव जीवनमा पानीको ठूलो महत्व हुन्छ । खानाविना मानिसहरु धेरै दिनसम्म बाँच्न सक्छन् तर के हामीहरु पानीविना त्यसरी नै बाँच्न सक्छौं ? मानिसहरु करीब दुई महिना खानेकुरा विना बाँच्न सफल छन् तर पानीविना मान्छे चार दिन करीब मात्र सफल छ ।
घर, शहर वा गाउँबस्ती जहाँ पनि हाम्रो स्वास्थ्य रक्षाको लागि, सफाईको लागि पानीकै आवश्यकता हुन्छ । घरभित्र पानीविना कुनै पनि काम हँुदैन । भान्छामा खानेकुरा तयार गर्न पानी, बाथरुममा नुहाउनको लागि पानी, ट्वाइलेटमा सफाईको लागि पानी, घर बाहिर कृषि कार्यको लागि पानी, पोल्ट्रीको लागि पानी, गाईवस्तु र अरु जनावरहरुको लागि पानी ।
मानिसहरुले आफ्नो पानीको आवश्यकता पुरा गर्न वर्षा याममा हरेक घरमा आ–आफ्नो तरिकाले जोहोे गरेका हुन्छन् । घर घरमा इनार, पानीको ट्यांकीको निर्माण गरेकै हुन्छन् । तर पनि पानीको आवश्यकता पूरा नहुँदा हरेक महिना पानी ट्यांकरहरुबाट ४÷५ हजार लिटर पानीको लागि रु. १२००÷– १५००÷– मा खरिद गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यो वास्तबिक बाध्यता हो यहाँ नगरबासीहरुको ।
सरकार छ, खानेपानी विभाग पनि छ । घर घरमा पानीको वितरण पनि भइरहेको छ । तर पाँच दिनको एकपल्ट दुई घण्टाजति पाईपबाट पानी वितरण हुन्छ । त्यो पनि नियमित छैन । खानेपानी कार्यालयबाट वितरण भइरहेको पानी शुरुमा धमिलो एवं कहिलेकाहीँ फोहोर ढल मिसिएको समेत आउँदा विवश गृहिणीहरु सफा पानी आउने आशामा घरघरमा धारा खोलेर प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन् ।
यसरी वितरण भएको पानी शुद्ध नहुँदा दुषित पानीबाट हुने रोगहरु देखापरिहेको हुन्छ । बर्षायाममा फोहरी मानिसहरुले जथाभावी लुकिछिपी दिसा बस्ने कारणले बेलाबेलामा देशको धेरै ठाउँहरुमा कहिँ टाईफाईडको महामारी, कहिँ हैजाको महामारी सुरु हुन्छ । कारण निम्न अनुसार हो ।
(१) स्यानिटेसनको ख्यालै नराखी क्याचमेन्ट एरियामा पानी जम्मा बनाएका रिजर्भभ्वाएरहरुमा स्प्रीङ्ग मुहानबाट निस्किने पानी सिधै ट्यांकीमा जाने बनाएको हुँदा बर्षातका चारैतिरबाट फोहोर लिएर आएको पानी मुहानको पानीमा मिसिन्छ र यो दुषित पानीले महामारी सुरु गर्छ ।
(२) यसरी आएको फोहोर पानीलाई रोक्न चारैतिर डाईभर्सन डिचेज बनाई फोहरलाई रोक्नुपर्छ ।
(३) बि.सं.२०१७ सालमा धुलिखेलको पिउने पानीको मुहान नजिक बनाएको क्याचमेन्ट एरियाको सानो १४४ क्यु.फि.को रिर्जभ्वाइरमा फोहरी मान्छेले जंगलमा गरेको दिसा मुहानको पानीमा मिसिएर धुलिखेलमा टाईफाईडको महामारी नै भएको थियो । जुनबेला धुलिखेलमा कुनै पनि स्वास्थ्य निकायहरु थिएनन् र करिब ५० जना जति बिरामी बनेपा मिसन अस्पतालमा ल्याएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा बिभागले स्यानिटेसनको काम गर्न मलाई खटाएको थियो । सबै रिर्जभ्वाइरहरुमा क्लोरिनेसन गरि जनतालाई हाई स्कुल मार्फत स्वास्थ्य शिक्षा दिने काम समेत गरेको थिएँ ।
पिउने पानी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बिषयमा विश्व स्वास्थ्य संघले बेलाबेलामा मापदण्ड तयार गरिरहेको हुन्छ । यसै अनुरुप होला बिकसित मुलुकहरुले चलाइरहेको नियम मुताविक यी मापदण्डहरु पुरा भएको पानी मात्र जनतालाई वितरण गर्छन् ।
(क) पानीबाट हुने रोगहरुबाट कन्टामिनेसन नभएको पानी
(ख) कुनै पनि विषादि पदार्थ नमिसिएको पानी
(ग) क्याल्सियम, माग्नेसियम जस्ता पदार्थ आवश्यकता भन्दा बढी नभएको पानी
(घ) कुनै पनि प्रकारको जीवित जिवाणु नभएको पानी ।
नेपालमा कामदार मान्छेहरु आफ्नो व्यस्तताको कारण नजिक बजारमा विक्री भइरहेको ब्रान्डेड जारमा वा बोतलको पानी खरिद गरी पिउने गरिरहेका छन् । पिउने पानी कसरी शुद्ध गर्ने भन्ने बिषयमा केही कुरा थाहापाउनु आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो स्वास्थ्य रक्षाको लागि निम्न नियमहरु पालना गनुपर्छ ।
(१) धाराबाट आएको अर्थात खानेपानीले वितरण गरेको पानी पहिले फिल्टर गर्ने अनि उमाल्ने । पानी उम्लिएपछि पाँच मिनट अरु थप उमाल्ने र चिसो गरेर बोटलहरुमा भर्ने र पिउने ।
(२) बोटलमा पानी शुद्ध गर्नु परेमा क्लोरीन ट्यावलेटहरु औषधि बिक्रेताहरुकहाँबाट खरिद गरी पानीमा राख्ने । औषधि राखेपछि कमसेकम एक घण्टा पर्खनु पर्छ । अनि पिउने पानी शुद्ध हुन्छ ।
(३) पानीमा राख्ने आयोडिन पनि पाइन्छ, बोेटलहरुमा २÷४ थोपा राखी माथि भनेजस्तै केहि समय पछि पिउन हुन्छ ।
(४) कलेरा–हैजाको महामारीमा यसको जिवाणु नाश गर्न पोटासियम परमागनेटले पनि काम गर्छ ।
(५) माथि (१) मा भनिए अनुसार आफै फिल्टर गरेर उमालेको पानी सर्वश्रेष्ठ पिउने पानी हुन्छ । तर आकासे पानी होइन । किनभने यसमा दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन मात्र हुन्छ । यसमा अरु आवश्यक मिनरल्स र आयोडिन हँुदैन ।